ko htike's prosaic collection: ဘယ်လို ဖိနှိပ်ပါစေ၊ မတရားတာကို ငုံမခံဘဲ ပြည်သူတွေက တော်လှန်ရန် အသင့် ရှိနေ
ဘယ်လို ဖိနှိပ်ပါစေ၊ မတရားတာကို ငုံမခံဘဲ ပြည်သူတွေက တော်လှန်ရန် အသင့် ရှိနေ
Today, Independence day, we show that we never give up, to fight for freedom. ... well done ... brothers and sisters, I vow to you, fully respect to your courage. we must win.
Peaceful demonstration, to release all political prisoners, At the front National League for Democracy (NLD) HQ, In Yangon
ရန်ကုန်မြို့တွင် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်
လူထု လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ခဲ့
ဇန်န၀ါရီ ၄၊ ၂၀၀၇
ယနေ့ နေ့ခင်း ရန်ကုန်မြို့ စံတော်ချိန် နေ့ခင်း ၁၂ နာရီတွင် ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၌ အကျဉ်းသား ထောင်ပုံစံ ၀တ်စုံများဖြင့် လူအများ တန်းစီးပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေး ဆိုသည့် စာတမ်းကို ဆွဲလျှက် စီတန်းလမ်းလျှောက် ခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ရွှေဂုံတိုင် ကြားတောရမှ ရွှေတိဂုံ ဘုရားအနီးအထိ လမ်းလျှောက်ခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။ ဓာတ်ပုံများကို ကောင်းကင်ပြာမှ တဆင့် ရပါသည်။
Posted by ကိုထိုက် at 12:27
13 April 2009 at 16:16